OFIRRAA KAASI MALEE* -
Jarri qawween as galee
Uummata keenya qalee
Ijoollee teenya qalee
Yaa Oromoo waltayii
Ofirraa kaasi malee!
Biyya keenya qabatee
Dilbii keenya qalatee
Sabbuu keenya saammatee
Buna keenya haratee
Damma keenya muuxatee
Dhiiga keenya xuuxxate!
Sammuusaa daran deegsee
Waanbadee nutti ta’ee
Waan badaan nutti ka’e!
Yaa saba-koo olka’ii
Isa ofirraa kaasii
Sansalta irraa baasi!
Saba-koo dubbiin baddee
Saba-koo biyyis baddee
Oljedhii harqi akka qeerransaa
Gadbayii caraani akka leencaa
Waltayi akka goondaa
Hiddi akka kanniisaa
Yoosuu yeeyyiin si dhiisaa!
Kan seenaan sitti dhaame
Tulluu Daalattii gubbaatti!
Erga yeeyyii ofirraa hariitee
Idda bacootti aduun dhiitee
Akkuma aadaa keetii
Akkuma seenaa keetii
Kan nagaan sitti dhufe
Nagaan simaddhuu bulchi
Ollaan-kee yoo beela’e
Waan qabduun du’a oolchi!
Atis ilmoo namaatii
Innis ilmoo namaatii
Akkuma duudhaa keetii
“Manni kan Waaqi” jedhii bulchi!
Akkuma bara Gadaa
Sirnaa fi sheexana jaraa
Ofirraa achi fageessi!
Dhala-kee isa moggaa moggaa fiffiigu
Isa humnaa-tokkummaa kee diddiigu
Gorsiitii ofitti deebisi
Daaraa jaraarraa kaasii
Namummaa fi qaroomina Gadaa
Gaaddisa miidhagaa kan Odaa
Hayaa, addunyaa beeksifaddhu
Namummaan namummaa-kee deebifaddhu!
Isaan si jalaa qalaman
Gaaraa-dakaa yaa’ii awwaalladdhu
Oromiyaan lamuu Aannolee
Oromiyaan lamuu Calanqoo
Hin-taatu jedhii waliif kakaddhu
Biiftuun Bilisummaa sii bawuufii
Bakkalchi Walabummaa sii ifuufii
Hayyee, jabeessitii abdaddhu!
* Hubachiisa: Walaloon kiyya kun ijoollee Oromoo waayee: “Master Plan Finfinnee” irratti diina biyya keenyaa dura dhaabattee, diinaan galaafatamteef mee yaadannoo haa tahu! Warreen isaanii fi firoottan isaanii irraa bakka kiyya dhaabachuun, mee imimmaan isaan irraa naaf haa haqu! Isaan manneen hidhaa Habashootaa keessatti dararamaa jiraniif, mee hamileessaa haa tahuufi! Dabaleesoo, uummata Oromoo Oromiyaa guutuu irraa gadi-yaa’uun, dhalawwan ofii cinaa dhaabateef raajeffannoo haa tahu!
Previous Oromo Community Demands An End To Foreign Aid
Next Waamicha Tokkummaa Jaarmayoota,Gurmuuleefi Qabsaawota Oromoo hundaaf.